Abakhiqizi nabahlinzeki begalari yomkhiqizo - Ifektri Yomkhiqizo Engabizi Ifektri
Imikhiqizo ye-Aluminium alloy die-casting isetshenziswa kakhulu ku-elekthronikhi, izimoto, izinjini, izinto zasekhaya nezinye izimboni zokuxhumana. Eminye imikhiqizo esezingeni eliphakeme, ephezulu kakhulu, eqinile ye-aluminium alloy nayo iyasetshenziswa ezimbonini ezinezidingo eziphakeme njengezindiza ezinkulu nemikhumbi. Ukusetshenziswa okuyinhloko kusezingxenyeni ezithile zemishini.
I-Brass ingxubevange yethusi ene-zinc njenge-alloy eyinhloko kanye nezinto zokuhlanganisa izinto. "I-punch ebomvu" empeleni inqubo eshisayo yokukhipha.
I-Aluminium alloy iyinsimbi eyakhiwe engeyona eyensimbi.
I-Aluminium alloy inokuqina okuphansi kepha inamandla amakhulu uma kuqhathaniswa, okusondele noma okudlula lokho kwensimbi esezingeni eliphakeme. Ine-plasticity enhle futhi ingacutshungulwa ibe ngamaphrofayili ahlukahlukene. It has conductivity kagesi omuhle kakhulu, conductivity ezishisayo nokumelana ukugqwala. Isetshenziswa kabanzi embonini futhi ukusetshenziswa kwayo kungokwesibili kuphela kunensimbi. Amanye ama-aluminium alloys angaphathwa ngokushisa ukuthola izakhiwo ezinhle zomshini, izakhiwo zomzimba nokumelana nokugqwala.
Ama-alloys ethusi ahlukaniswe ngezigaba ezimbili, okungukuthi ithusi nethusi. I-Brass ingxubevange yethusi ene-zinc njenge-alloy eyinhloko kanye nezinto zokuhlanganisa izinto.
I-Brass ingxubevange eyakhiwe ngethusi ne-zinc, futhi iyinto ekahle yokukhiqiza izingxenye ezenziwe ngomshini (kufaka phakathi izingxenye ezihlanganisiwe). I-die casting isifushanisiwe njengokufaka, okuyindlela yokusakaza lapho uthelwa khona ingxubevange yensimbi egumbini lokucindezela, umgodi wesikhunta sensimbi ugcwaliswa ngejubane elikhulu, futhi i-alloy liquid iyaqina ngaphansi kwengcindezi yokwenza ukusakaza. Inzuzo ka-Ouzhan bekulokhu kungokwezifiso ze-valves zethusi, okungukuthi, ama-valve enziwe ngethusi, okuyizingxenye zezimboni. Inqubo yokukhiqiza yaqala ithuthukiswe yiNingbo, iZhejiang eChina.
I-Carbon steel i-iron-carbon alloy enokuqukethwe kwekhabhoni okungu-0.0218% kuya ku-2.11%. Ebizwa nangokuthi i-carbon steel. Ngokuvamile, iqukethe nenani elincane le-silicon, i-manganese, isulfure ne-phosphorus.
I-Aluminium alloy iyinsimbi eyakhiwe engeyona eyensimbi. I-Aluminium alloy inokuqina okuphansi kepha inamandla amakhulu uma kuqhathaniswa, okusondele noma okudlula lokho kwensimbi esezingeni eliphakeme. Ine-plasticity enhle futhi ingacutshungulwa ibe ngamaphrofayili ahlukahlukene. It has conductivity kagesi omuhle kakhulu, conductivity ezishisayo nokumelana ukugqwala. Isetshenziswa kabanzi embonini futhi ukusetshenziswa kwayo kungokwesibili kuphela kunensimbi.
I-Brass ingxubevange eyakhiwe ngethusi ne-zinc, futhi iyinto ekahle yokukhiqiza izingxenye ezenziwe ngomshini (kufaka phakathi izingxenye ezihlanganisiwe). I-die casting isifushanisiwe njengokufaka, okuyindlela yokusakaza lapho uthelwa khona ingxubevange yensimbi egumbini lokucindezela, umgodi wesikhunta sensimbi ugcwaliswa ngejubane elikhulu, futhi i-alloy liquid iyaqina ngaphansi kwengcindezi yokwenza ukusakaza.
Imishini yePlastiki ifaka izinto ezahlukahlukene ezilungele imishini, i-nylon (PApolyamide), i-PC (i-polycarbonate), i-ABS (i-co-polyacrylonitrile-butadiene-styrene), i-PMMA (i-plexiglass, i-poly Acrylic methyl ester), i-polytetrafluoroethylene (F-4), i-epoxy (EP). Lapho kukhethwa okokusebenza kwemidwebo yokuklama, kufanele kukhethwe amaplastiki afanele wobunjiniyela ngokuya ngemvelo yokusetshenziswa kanye nezidingo ezifanayo zezingxenye zomshini ze-CNC.